I-china Industrial rim for Boom lift Tele handler china manufacturer kunye nabenzi | Hywg
Umzi mveliso we-Boom lift ophethe i-Tele china manufacturer
Iudini lwendlu isetyenziswa kakhulu ngeendlela ezininzi zezithuthi ezinjenge-boom lift, itrektara, i-crane, isiphatho sefowuni, umlayishi we-backhoe, i-wheel excavator njlnjl. Iifeleni zoshishino ke kunzima ukuwahlula. Kodwa uninzi lwazo lubume be-1-PC kwaye ubungakanani bungaphantsi kwe-intshi ezingama-25. Ukusukela ngo-2017 i-HYWG iqalile ukuvelisaudini mveliso kuba uninzi lwabathengi bethu be-OE banemfuno. IVolvo Korea icele i-HYWG ukuba iphuhliseIifeleni zoshishino ngokuba mqengqeleki kunye ivili excavator. Iqela le-Zhongce Rubber lacela i-HYWG ukuba iphuhliseIifeleni zoshishino yokunyusa i-boom. Ke ngoko kwi-2020 HYWG ivule umzi-mveliso omtsha kwiphondo laseJiaozuo Henan ukugxila ku-iudini lwendlu umvelisi, umthamo wonyaka we udini mveliso yenzelwe njengeerandi ezingama-300,000 ngonyaka.
Yintoni irim mveliso?
Iudini lwendlu isetyenziswa kakhulu ngeendlela ezininzi zezithuthi ezinjenge-boom lift, itrektara, i-crane, isiphatho sefowuni, umlayishi we-backhoe, i-wheel excavator njlnjl. Iifeleni zoshishino ke kunzima ukuwahlula. Kodwa uninzi lwazo lubume be-1-PC kwaye ubungakanani bungaphantsi kwe-intshi ezingama-25. Ukusukela ngo-2017 i-HYWG iqalile ukuvelisaudini mveliso kuba uninzi lwabathengi bethu be-OE banemfuno. IVolvo Korea icele i-HYWG ukuba iphuhliseIifeleni zoshishino ngokuba mqengqeleki kunye ivili excavator. Iqela le-Zhongce Rubber lacela i-HYWG ukuba iphuhliseIifeleni zoshishino yokunyusa i-boom. Ke ngoko kwi-2020 HYWG ivule umzi-mveliso omtsha kwiphondo laseJiaozuo Henan ukugxila ku-iudini lwendlu umvelisi, umthamo wonyaka we udini mveliso yenzelwe njengeerandi ezingama-300,000 ngonyaka. Iifeleni zeshishini zihlanganisene nevili lomoya elingasetyenziswanga kuphela kodwa kunye nevili eliqinileyo kunye neetayiti egcwele itayara, irim kunye nesisombululo setayara kuxhomekeke kwisicelo semoto. Mva nje imarike yokunyusa i-boom e-China ibikhula ngamandla, i-HYWG iphuhlise uluhlu olupheleleyo lweerifim zokuxhasa izixhobo ze-boon.
Zingaphi iintlobo zeefeleni zeshishini?
Umtya wamashishiniihlala i-1-PC rim, ekwabizwa ngokuba yi-single-piece rim, yenziwa ngentsimbi enye kwisiseko se-rim kwaye yenziwa yohlobo olwahlukileyo lweeprofayili, i-1-PC rim ihlala ilingana nama-intshi angama-25, njengelori I-1-PC rim ubunzima bokukhanya, umthwalo olula kunye nesantya esiphezulu, isetyenziswa ngokubanzi kwizithuthi ezilula ezifana netrektara yezolimo, itreyila, isiphatho sefowuni, isavali-vili, ukuphakamisa i-boom kunye nolunye uhlobo loomatshini bendlela. Umthwalo we-1-PC rim ulula.
Usetyenziselwa ntoni umphetho weefektri?
Eyethu udini mveliso ingasetyenziselwa izithuthi ezinje:
(1) Umnxibelelanisi wefowuni
(2) Ukunyusa iBoom
(3) Umlayishi we-Backhoe
(4) Umatshini wokumba wevili
Ubungakanani beRim Uhlobo lweRim Ubungakanani beTire Umzekelo womatshini
6.75 * 17.5 1-PC 225 / 50-17.5 Nyusa Boom
7.00T * 16-2PC 2-PC 9.00-16 Nyusa Boom
11X20 1-PC 315 / 55D20 Nyusa Boom
11X24 1-PC 36X14D610 Nyusa Boom
10X24 1-PC 33X12D610 Nyusa Boom
12X24 1-PC 385 / 65D24 Nyusa Boom
11.75X24.5 1-PC 355 / 55D625 Nyusa Boom
13X24.5 1-PC 15-625 Nyusa Boom
13X28 1-PC 385 / 45-28 Nyusa Boom
9.75X16.5 1-PC 26X12-16.5 Nyusa Boom
6.75x16.5 1-PC 240 / 55D17.5 Nyusa Boom
16.5 × 9.75 1-PC 12-16.5 Ngokubanzi
16.5 × 8.25 1-PC 10-16.5 Ngokubanzi
12X7 1-PC 23X8.50-12 Ngokubanzi
15X13 1-PC 31 / 15.5-15 Ngokubanzi
17.5X10.5 1-PC 14-17.5 Ngokubanzi
I-12X10.5 1-PC 26X12-12 Ngokubanzi
16JX17 1-PC 500 / 40-17 Ngokubanzi
Izinto eziluncedo kuthi?
(1) I-HYWG ibonelela ngoluhlu olupheleleyo lwe Iifeleni zoshishino ngakumbi i nyusa ibhoom izixhobo.
(2) Umgangatho we-HYWG ubonakaliswe yi-OEM enkulu njengeVolvo, JCB kunye noDingli.
(3) Umgangatho we-HYWG uqinisekisiwe ngokusika izixhobo kunye nezinto ezomeleleyo, uninzi lwentsimbi esiyisebenzisayo yi-Q345B elingana ne-S355 eYurophu nase-A572 e-USA.
(4) I-HYWG ibonelela ngokuhambisa ngokukhawuleza kunye ne-MOQ encinci
Egqithileyo Umda weforklift yeLinde kunye ne-BYD yaseChina umenzi we-OEM
Okulandelayo: Izixhobo ze-OTR Rim China umenzi we-OEM we-25 ″